XOG: Fahad Yaasiin oo kulan” Qarsoodi ah” oo shaki badan hareeyay la yeeshay Kheyre | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: Fahad Yaasiin oo kulan” Qarsoodi ah” oo shaki badan hareeyay la...
Xog hoose oo aan helnay ayaa sheegeysa in Kulan qarsoodi ah uu Muqdisho ku dhexmaray Taliyaha Nabad sugida Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Ra’iisal wasaarihii hore haddana ah musharaxa madaxweyne Xasan Cali Kheyre, kaas oo salka ku hayo arrimaha Siyaasadda Soomaaliya.
Sida Illo Xog ogaal ah inoogu warameen kulanka oo ka dhacay Hotel Baradise oo uu musharax Xasan Cali Kheyre uu degan yahay ayaa waxay labada dhinac kulankooda uu ahaa mid Albaabada u xiran yahay,waxaana naadir ah in la ogaado arrimaha sida rasmiga ah kaga wada hadleen.
Balse, warar aan la hubin ayaa sheegaya in Xasan Cali Kheyre iyo Fahad Yaasiin si gaar ah kaga hadleen xaaladda Siyaasadeed ee dalka iyo sida ugu haboon ee looga gudbi karo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Xasan Cali Kheyre uu jismi ahaan midowga musharaxiinta uu kala joogo balse uu qalbigiisa ku xiran yahay Villa Soomaaliya.
Sidoo kale, Mr. KHEYRE ayaa ah musharax qarsoon oo ku dhex dhuumanaya mucaaradka, kuwaas oo si weyn u diidan hanaanka doorashada ay wado Dowladda.
Musharax Xasan Cali Kheyre ayaa ka mid ah mas’uuliyiin iyagoo banaanbax nabadeed dhigaya lagu xabadeeyay agagaarka Garoonka diyaaradaha Aadan cadde.
Previous articleBeesha Caalamka oo War kasoo saartay wada-hadallada Rooble & Midowga Musharixiinta